Inona ireo fomba azonao ampiasaina mba ahafahana mamadika ny SEO eo an-toerana?
Andriamatoa Backlinks dia manana anjara toerana manan-danja eo amin'ny dingam-panavaozana tranonkala ary manana fiantraikany goavana amin'ny filaharana fikarohana. Tsy mampaninona na manana orinasa na orinasa eo an-toerana ianao, mba hamoronana filaharana mavitrika an-tserasera mila miverina amin'ny SEO. Ny fanontaniana dia ny fomba hahazoana bakalorea voajanahary amin'ny orinasanao amin'ny fotoana fohy? Ity lahatsoratra ity dia natao hanampiana anao hahita ny fomba hanombohana ny fanentanana fanorenana eo an-toerana.
Lasa mifandray amin'ny rohy
Raha ny tanjonao dia hanangana rohy amin'ny tranokalanao any an-toerana, tokony ho fantatrao ny zavatra tadiavinao rehefa manorina izany rohy izany. Ireo tranonkala eo an-toerana dia natsangana miaraka amin'ny tanjona mba hanatsarana ny mombamomba ny tranokalany mankany amin'ny toerana misy azy.
Ireo manam-pahaizana manokana momba ny fikarohana eto an-toerana dia miasa eo ambanin'ny endrika fanatsaràna ao an-toerana amin'ny fanitsiana ny fampahalalana amin'ny fifandraisana, famoronana kaonty fandraharahana ao amin'ny Google MY Business, fananganana votoatin'ny hyperlocal, ary fananganana rohy mankany amin'ny tranonkala. Ireo endri-pamokarana rehetra ireo dia natao hanamboarana toeram-piasana an-tserasera ao an-toerana amin'ny valin'ny fikarohana biolojika ho an'ny teny jeôrjiana manokana. Ny fanentanana eo an-toerana dia tokony hanome anao fahafahana hiresaka amin'ny mpihaino anao.
Mety hitarika ireo tranonkala lehibe sy manam-pahefana ny tsenan'ny tsenan'ny tsenan'ny varotra anao satria izy ireo dia manana raharaham-barotra kely eo an-toerana izay afaka misy tsara amin'ny pejy tsotra. Na izany aza, satria misy fiantraikany eo amin'ny orinasa misy anao izy ireo, ny fahazoana rohy avy amin'izy ireo dia ho fotoana tsara indrindra hanatsarana ny fanentanana ny marika.
Raha ny lalàna dia misy ny fetran-tsakafo kely amin'ny fametrahana tetibola ary tsy afaka mividy rindran-kira avy amin'ireo mpitory lehibe toy ny Forbes, Entrepreneur, The New York Times, ary hafa. Raha tokony ho izany, ny fandraharahana eo an-toerana dia mety hahazo tombony amin'ny famoahana ny lahatsorany ao amin'ny sehatry ny media ao an-toerana, bilaogy natokana ho an'ny hetsika ao an-toerana na loharanom-baovao.
Ireo andininy dia tokony!
Amin'ny tsipika ambany amin'ny fanentanana fananganana rohy, azonao atao ny manomboka mametraka ny fitanisàna sy ny fanitsiana ny fampahalalana anananao amin'izao fotoana izao.
Ny fitenenana dia tonga lafatra ho an'ny orinasa madinika satria manolotra fahafaha-mametraka ny fampahalalana amin'ny fifandraisana any andaniny ary manome anao fahafahana hametraka rohy mankany amin'ny loharanom-baovao azo antoka izay tsy mandray anjara amin'ny hetsi-panoherana tsiambaratelo ary mety ho azon'ny mpampiasa mahazatra raha toa izy ireo ka mamaritra amin'ny teny filamatra fohy. Ny tanjona voalohany amin'ity sehatra ity dia ny famoahana ny anaranao.
Ahoana ny hamerenana ny backlinks amin'ny SEO eo an-toerana?
Ireo mpivarotra an-tserasera izay manangana sehatra fampielezan-kevitra SEO ao an-toerana dia mila mamorona kokoa noho ireo izay manao fanatontosana fikarohana lalindalina kokoa ho an'ny orinasa lehibe satria voafetra ny fahafaha-mifandray ao amin'io sehatra io. Ny tompon'ny tranokala dia sahirana ny hamaritra ny fikarohana momba ny fikarohana ao an-toerana izay tsy manana volan'ny fikarohana.
Raha mitady vahaolana eo an-toerana ianao amin'ny raharaham-barotra, tokony ho azonao hoe aiza ny fetran'ny toerana ao an-toerana ary manamboara ity toerana ity ho toy ny fototra iandraiketanao. Ny fahafantaranao ny fetran'ny fetran-javatra dia ahafahanao mieritreritra kokoa amin'ny fomba mahatalanjona sy tsy tapaka hahita fahafahana tonga lafatra ao amin'ny sehatra izay hitarika anao amin'ny lanjany indrindra amin'ny tranonkalan'ny orinasanao an-tserasera Source .